Cayaaryaahnka Ugu Taajirsan Dunida Oo Ka Yaabiyey Ronaldo, Messi, Hazard Iyo Hantiileyaasha Yurub | Shabakada Qalinkacayaaraha.com
Cayaaryaahnka Ugu Taajirsan Dunida Oo Ka Yaabiyey Ronaldo, Messi, Hazard Iyo Hantiileyaasha Yurub
Published on January 8, 2018 by Caydiid Cabdi Raxmaan Aadan · No Comments ·
(08-01-2018) Marka laga hadlayo ciyaaryahannada lacagta badan haysta, waxa markiiba maskaxdaada kusoo dhacaya Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, David Beckham, Rooney, Ronaldinho iyo xiddigo kale, hase yeeshee, xaqiiqadu way ka fogtahay middaas.
Bishii August ee sannadkii tegay ee 2017, waxay majaladda Forbes sheegtay in tobanka laacib ee dunida ugu qanisan uu hoggaaminayo Cristiano Ronaldo oo haysta £250 million, kaalinta labaadna uu ku jiro Lionel Messi oo haysta £230 million, kaalinta saddexaadna uu fadhiyo Zlatan Ibrahimovic oo xisaabtiisa u kaydsan tahay £110 million, haka Rooney iyo Eden Hazard ay ku jiraan kaalmaha afraad iyo shanaad oo ay haystaan lacag dhan £93 million iyo £77 million siday u kala horreeyaan.
Shanta ciyaartoy ee kale ayaa haysta Gareth Bale (£56 million), Neymar (£49 million), Yaya Toure (£43 million), Sergio Aguero (£40 million) iyo John Terry (£39 million).
Tobankan ciyaartoyba waxay lacagtan ku heleen xirfaddooda, hase yeeshee, waxa jira nin aanay waligood gaadhi karin.
Waa 19 jir, waxaanu u ciyaaraa Leicester City oo heerkeeda hoose ka tirsan yahay. Waxa uu u dhashay waddanka Brunei.
Wiilkan da’da yar oo lagu magacaabo Faiq Bolkiah ayaa waxa awoow u ah suldaanka maamula dalka Brunei oo lagu magacaabo Hassanall Bolkiah oo hantida uu haysto ay kor u dhaaftay 20 bilyan oo Euro.
Faiq oo ka ciyaara baal weerar ah waxa uu xirfaddiisa waddanka Ingiriiska ka bilaabay kooxda AFC Newbury ka hor intii aanu u wareegin Southampton oo uu uga sii gudbay Arsenal iyo Chelsea.
Aabbaha dhalay Faiq oo lagu magacaabo Jefri Bolkiah ayaa la sheegay in bil gudaheed uu khasaariyey lacag dhan 35 milyan oo Gini oo uu ku isticmaalay gawaadhi, saacado iyo qalimaan dahabka cad ah. Ninkan lacagta daadaadinaya ayaa la wariyey in gawaadhida uu leeyahay ay hadda gaadhayaan 2,300 (laba kun iyo saddex boqol oo gaadhi), kuwaas oo ka kooban baabuurta qaaliga ah ee Ferrari, Rolls-Royces iyo Bentleys.
Markii Jefri uu 50 jirsaday, waxa uu 12.5 Gini kusoo kiraystay heesaagii caanka ahaa ee Michael Jackson oo ugu heeso ugu qaaday garoon weyn oo loo dhisay xafladda dhalashiisa oo kaliya.
Faiq oo waalidkiisu ay haystaan lacagaha tiradaas leh, waxa uu ogyahay inuu yahay mid ka mid ah hantiileyaasha dunida ugu taajirsan, hase yeeshee, waxa uu wakhtigan ku kooban yahay kubadda cagta, waxaana waraysi qariib ah oo uu warbaahinta siiyey uu ku sheegay in qoyskiisu ay ka caawiyaan inuu noqdo xirfadle kubadda cagta.